Qoysas biyo la'aan uga barakacay Leego
Qoysas biyo la'aan uga barakacay Leego
Photo | Keydka sawirrada/Cabdiraxmaan Xaaji/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 21 January, 2016 SHABELLADA HOOSE
(ERGO) - Ilaa 45 qoys ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay biyo-yari uga barakacay deegaanka Leego oo 45 km u jira degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose. Afar warood oo ay dadka deegaankaas biyaha ka cabi jireen ayaa guray sababo la xiriira roob-yari. Deegaanku ma laha wax ceel ah.
Qoysaska oo xoolo-dhaqato ah ayaa u barakacay degmada Wanlaweyn iyo deegaannada hoos taga ee kala ah Yaaqbari-weyne iyo Belli-doogle oo ay ku yaallaan ceelal ay biyo ka cabi karaan. Biyo-yarida ayaa sababtay dhimashada 280 neef oo isugu jira ari iyo lo’, sida uu Raadiyo Ergo u sheegay guddoomiyaha maamulka Leego, Abuukar Cabdullaahi Isxaaq.
Qoysaska hadda ku nool Leego ayaa ka cabanaya biyo-yari. “Haddii aan ku sii jirno biyo yaraanta oo sii kordheysay labaatankii maalin ee la soo dhaafay waxaan ka cabsanayaa inaan oon u dhimanno,” ayay tiri Xaliimo Nagaar Cali oo Raadiyo Ergo u sheegtay in 11 neef oo ari ah ay oon uga dhinteen. “Hay’adaha iyo dowladdaba waxaan ka codsaneynaa inay naga soo gaaraan,” ayay tiri.
Cali Ciise Muxumed oo ku sugan Leego ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ay biyo-yarida uga dhinteen 30 neef oo lo’ ah. “Biyo-yarida weligeed way ka jirtay deegaanka, laakiin hadda ayay noogu daran tahay,” ayuu yiri. Shabeellaha hoose wuxuu ka mid yahay gobollada uu aadka uga da’ay roobkii deyrta, hase yeeshee deegaannada ku teedsan webiga Shabeelle ayuu ku badnaa.
Gaadiid booyado ah oo ka soo aroora degmada Wanlaweyn ayaa qaab ganacsi biyaha u gaarsiiya Leego. Fuustada biyaha ahna waxaa lagu kala iibsadaa 200,000 So.Sh oo u dhiganta $10. “Waxaan nahay dad sabool ah, mana awoodno inaan lacagtaas biyo ku iibsanno, sidaas daraaddeed qofkii iibsada ayaan 20 liter ka gadannaa oo aan isku celcelinnaa maalinta oo dhan,” ayay tiri Xaliima. Labaatanka liter waxaa la kala siistaa 10,000 So.Sh oo u dhiganta nus doollar.
“Qofka saboolka ah haddii uu cunto soo helo waxaa dhici karta biyo la’aanta darteed inuu dabka u shidan waayo,” ayuu yiri Abuukar Cabdullaahi oo ka codsaday hay’adaha samafalka inay dadkaas caawiyaan.